June 13, 2019 muqdisho Puntland, Wararka Maanta 5
Wareegto kasoo baxday Xafiiska Guddoomiye ku xigeenka gobolka Nugaal Cali Salaad Diiriye Faarax ayaa waxaa lagu Magacaabay guddoomiyaha Amniga iyo ganacsatada Koonfur Galbeed ee ku nool gobolka Nugaal.
Cabdiraxmaan Mukhtaar Maxamed ayaa loo Magacaabay xilkaas, isaga oo ka Shaqeyn doona Amniga iyo isku-xirka dadka kazoo jeeda deegaanada Maamulka Koonfur Galbeed eek u sgean Guuda ahaan Gobolka Nugaal Puntland.
Wareegtada ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in in markii la arkay aqoontiisa iyo waaya-aragnimadiisa iyo baahida loo qabo in Cabdiraxmaan Mukhtaar Maxamed xilkaas, iyada oo Ganacsayada iyo Bulshada kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed laga dalbaday inay la Shaqeeyaan.
Waa mid ay qaram eye end
Waa mid ay qarameyeen oo cidiisi ka bedelaan abtirsi cusubna u sameeyeen oo ku yiraahdeen cidaada baydhabo Joogta soo bedel oo ka soo dhig Harti halamash
Istusnimada madaxda Puntland waxaan ka filayaa in dhawaan laga soo wariyo riyaha Garoowe dhex meereysta ayuu Deni guddoomiya u magacaabay!
Sida aan aaminsanahay Soomaali kasta oo Puntland ku nool waa muwaaddiin dalkiisii goob ka mid ah deggan. Haddii ay xataa kuwa deegaanada kale ka soo jeedaa ay jaaliyad ahaan isu habeynayaan maxaa madaxweynahaa dhan ku soo hoos celiyay magacaabidda guddoomiyahooda?
Ma se ogtihiin in uu Deni billaabay in uu Puntland Itoobiya ka xaraasho oo uu baddeeda iyo madaarkeeda ba wasaaradda difaaca Itoobiya iyo Ethiopian Airlines ka kireeyay?
Wax cadeyn ah keen arintaan Itoobiya? Mise Farmaajo aa ku khaldeysaa yaa wadanka hawada iyo bada xukuma? I mean SOMALIA
Masaakiinta kor ku taxan waxaan u sheegayaa in Puntland ay ku noolyihiin kala baroo bar dad u soo haajiray oo kala qowmiyad ah sharciga ayaa dadka hogaaminaaya nin walba oo jecel nabad wa yimi Magacaabista ninkaan ka oo jeeda koofur galbeed baa la buun buuninayaa Garoowe tag oo qaybta booliska qorax ka soo bax waa kuma taliyaha Booliska. Inta aan u dhalan oociidanka weligeed ku jirtay mala kulanteen. Adeerayaalow nin yar baan ahayn been iiin sheegimaayo waa ku noolahay weligey waxaana ka soo jeedaa Abgaal Warsangeli Waxaan idin leeyahay soo dhawaada, Nala cuna hilib gelka
Masaakiinta kor ku taxan waxaan u sheegayaa in Puntland ay ku noolyihiin kala baroo bar dad u soo haajiray oo kala qowmiyad ah sharciga ayaa dadka hogaaminaaya nin walba oo jecel nabad wa yimi Magacaabista ninkaan ka oo jeeda koofur galbeed baa la buun buuninayaa Garoowe tag oo qaybta booliska qorax ka soo bax waa kuma taliyaha Booliska. Inta aan u dhalan oociidanka weligeed ku jirtay mala kulanteen.